Interview with U Win Tin – လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆင်ခြင်တုံတရား ရှိသလား – MoeMaKa Burmese News & Media
April 24, 2012 April 22, 2014 admin
← ဆီယက်တဲလ်၊ ဝါရှင်တန်မှ ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသင်း၏ ပထမခြေလှမ်း
Nay Myo Aye – ခရာတွတ်သံ ဘယ်သူထံ →
အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဆိုတာတော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ် – (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်)
U Win Tin ဓာတ်ပုံသတင်း ဦးဝင်းတင်
9 thoughts on “Interview with U Win Tin – လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆင်ခြင်တုံတရား ရှိသလား”
Please. Likeacomputer. If answer is yes go to OK, If answer is No where we go?
PLEASE DEMOCRACY BIRD CAN FLY BY TWO WINS
(PLEASE GODS BLESS MYANMAR)
This interview is suchavery good one.Especially, the questions are very very good(not like other website like Irrawaddy,DVB & Mizzima).
Moemaka is the only one site who feature weekly interview with Sayar U Win Tin.
The man in Blue isaGreat Honorable Man with suchagreat vision and leadership.
Long Live & God Bless U Win Tin.
တစ်ခုစဉ်းစားရမှာက နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဖက်ကလည်း တခါတလေ လျှော့ပေးရတာ ရှိမှာပဲလေ။ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် ပြိုင်နေကြရုံနဲ့တော့ ခရီးမရောက်နိုင်ဘူး။ ပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီး အလျှော့ပေးသင့်တာကို အလျှော့ပေးသင့်တယ်ထင်တာပဲ။ ပြည်သူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ လွှတ်တော်တက်စေချင်လို့ မဲပေးခဲ့ကြတာပါ။ လွှတ်တော်တက်ဖို့အတွက် ဒီစကားလုံးလေးက အရေးမပါပါဘူးဗျာ။ ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ စကားလေးလုံးနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် (သို့) လေးစားလိုက်နာ ဆိုတဲ့စကားလေးလုံး ဘယ်ဟာက ပိုအရေးကြီးလဲ
If you do not know , don’t say . Be quiet !
ဘယ်လို ဦးနှောက်မျိုးနဲ့ ရေးတဲ့မှတ်ချက်ပါလိမ့်။
အပေါ်က jojo ပြောသလိုပဲ။ မသိရင်လဲ တိတ်တိတ်နေပါလား။
ဘာတွေဖြစ်လို့၊ဘာတွေပြောနေကြပြီး၊ ဘာကြောင့်မို့ ဒီစကားလုံးက ဒီလောက်တောင်အရေးပါနေရတာလဲ။ မသိရင်လဲ သိတဲ့သူတွေလိုက်မေးကြည့်လိုက်အုံး။အဲဒါမှမသိဘူး ဆိုရင်လဲ။ပါးစပ်ပိတ်ထား။
မပိတ်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ မင်းဘာမှမသိပဲဝင်ပြောနေတာ သူများတွေစိတ်ညစ်စရာဖြစ်တာပေါ့။
လွှတ်တော်ထဲရောက်ဖို့အတွက် ပြည်သူကမဲပေးတာမဟုတ်ပါဖူး တိုင်းပြည်လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်မဲပေးတာပါ အခုရှင်းမှ နောင်ရှင်းပါ ဒီအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေက ရိုးနေပါပြီး အခတ်မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်နေမှာပါ အပြီးတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အခင်းအကျင်းအကုန်လုပ်ရပါ့မယ် ကျွန်တော်က တော့ NLD ရဲ့လုပ်ရပ်ကိုထောက်ခံတယ်ဗျာ တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ စောင့်လာတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဖူး သန်းခေါင်ထက်ညဉ့်မနက်တော့ပါဖူး အခုမျိုးဆက် မစံစား၇င်တောင် နောက်မျိုးဆက်မှခံစားပါမယ် အပြီးတိုက်ပါ ဘုရင်နောင် ဖောင်ဖျက်တိုက်ပွဲဝင်ပါ လူယုတ်မာ မျိုးဆက်ကိုရှင်းထုတ်ပါ
သမ္မတကြီး…..ဟီး…ဟီး……ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အစိုးရအသစ်စက်စက်ကြီးရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုမှုတွေကို
အားပါးတရလက်ခုပ်တီးခဲ့ကြသူတွေ။ သတိလက်မလွတ်ဖို့အကြံပေးခဲ့ကြသူတွေကို ရန်စွယ်ငေါငေါတုန့်ပြန် ခဲ့ကြသူတွေ။ ဘယ်နားမှာသွားပုန်းနေကြလဲ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို ဘယ်လိုပြင်ကြမှာလဲ။
Ko Nay Oo Lin says:
Never see for country interest.
NLD is right.they know what people want so they are working for it.We believe and trust NLD also support you.Do what you have to do.